भुलेर पनि रातीको समयमा नसोध्नुहोस् महिलासँग यी कुरा – Gazabkonews
भुलेर पनि रातीको समयमा नसोध्नुहोस् महिलासँग यी कुरा
महिला र पुरुषबीचको सम्बन्ध सदियौं देखि बहस र विवादको केन्द्रमा छ । महिलाले पुरुषलाई नबुझ्ने र पुरुषले महिलालाई नबुझ्ने गुनासो नयाँ कुरा होइन ।
तर महिलासँग राम्रो सम्बन्ध राख्नका लागि उनीहरुसँग केही प्रश्न सोध्नै नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
१. के म तिमीलाई चु,म्ब,न गर्न सक्छु ?
कहिल्यै पनि महिलालाई म चु,म्ब,न गर्न सक्छु ? भनेर सोध्नु हुँदैन । महिलाले चुम्बनको लागि पनि सोध्ने पुरुष मन पराउँदैनन् । चु,म्ब,न पनि सोधेर गर्ने केटा उनीहरलाई बच्चा जस्तो लाग्छ ।
२. धन सम्पतिको धा,क
महिलाहरुले सम्पतिको धा,क लगाउने र कुरा गर्दै गर्दै कार वा बाइकका विषय झिकेर रवाफ देखाउन खोज्ने पुरुषलाई मन पराउँदैनन् । उनीहरुलाई यस्ता कुरा भन्दा केटाको प्रस्तुती र आत्मविश्वाससँग बढी चासो हुन्छ । मेरो कार देख्या छ मेरो बाइक देख्या छ भनेर कहिल्यै पनि नसोध्नुस् ।
कुनै पनि स्त्रीलाई उसले संगत गर्ने केटाको विषयमा सोधेको सोध्यै नगर्नुस् । नकारात्मक टिप्पणी पनि नगर्नुस् । यसले स्त्रीलाई इर्श्या वा शंका गरेको अनुभव हुन्छ जुन् सम्बन्धका लागि घा तक हुन्छ ।
मासिक रु एक सय शुल्कमा पढाइ हुने नेपालकै सस्तो विद्यालयमा पढेकी एक छात्राले संसारकै महँगो मध्येको कलेज पढ्न स्विट्जरल्यान्ड गएकी छन् ।
उत्तम सञ्जेलले सञ्चालन गरेको समता शिक्षा निकेतनबाट एसईई उत्तिर्ण गरेकी चितवनकी अस्मिता अधिकारी संसारको महंगोमध्ये एक र सुविधायुक्त आइगलन कलेज स्वीजरल्याण्डमा छात्रवृत्तिमा पढ्न गएकी हुन् ।
अध्ययनका लागि वार्षिक करिब २ करोड शुल्क लाग्ने उक्त कलेजमा पढ्का लागि अस्मिताले चार वर्षे निःशुल्क छात्रवृत्ति पाएको समता शिक्षा निकेतनका संस्थापक उत्तम सञ्जेलले बताए ।
जोन कर्टेलले १९४९ मा स्थापना गरेको उक्त कलेज संसारकै विशिष्ट कलेजमध्येमा गनिन्छ । भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चनका छोरा अभिषेक बच्चनले समेत त्यहीं पढेका थिए । नेपालमा जन्मिएका व्यापारी तथा गैस आवासीय नेपाली सँगमा पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोकी छोरीले मात्रै त्यहाँ पढ्ने अवसर पाएकी छन् ।
अस्मिताका बुबा अमृत ट्याक्सी चालक हुन् । रोजगारीका लागि खाडी मूलुक गएका उनी विरामी परेर नेपाल फर्केपछि छोराछोरीलाई पढाउने कुनै उपाय नहुँदा समतामा भर्ना गरेका थिए । एक छोरीले समताबाटै प्लस टु उत्तिर्ण गरेकी छन भने भर्खर एसईई दिएकी अस्मिताले सँसारकै महँगो मध्येको कलेज पढ्न अबसर पाइन् । अस्मिताका बुबा अमृतले छोरी विश्वकै महँगो कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने भएपछि एकदमै खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्, “ट्याक्सी चलाएरै मैले महँगो कलजेमा पढाउन सक्दैनथे । तर बीचमा यस्तो मौका जुरेको छ । छोरीलाई सस्तो स्कुल भनेर समता स्कुलमा पढाएको थिएँ ।”
गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोले धनीका छोराछोरीले पढ्ने ठाउँमा गरिबका विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भनेर पहल गर्दै आएका थिए । पछिल्लो दुई वर्षयता महतोेले समता स्कुलमा आवतजावत बढाएका थिए । महतोले समता स्कूलको बारेमा बताएपछि गतवर्ष आइगलन कलेजका संस्थापक प्राध्यापक रिचर्ड म्याकडोनाल्ड आफै यहाँ आएका थिए । नेपालकै न्यून शुल्कमा अध्यापन गराउने स्कुलका संस्थापक उत्तम सञ्जेललाई वर्षमा एकजना विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा स्वीजरल्याण्ड लैजाने कुरा गरेका थिए ।
त्यो समयमा अस्मिता कक्षा १० मा पढ्दै थिइन् । विद्यालयका धेरै विद्यार्थीहरुको म्याकडोनाल्डसँग सामुहिक रुपमा अन्तरक्रिया पनि भएको थियो । करिब पाँचसय जनासँग भएको अन्तरक्रियामा भविष्यमा पाइलट, डाक्टरलगायत बन्ने भनेका थिए भने अस्मिताले म्युजिसियन बन्ने भनेकी थिइन् । कक्षा १२ बाट एकजना विद्यार्थीलाई सो कलेजले छात्रबृत्ति दिने भनिएको कारण अस्मितालाई आफूले छात्रबृत्ति पाउने कल्पना सम्म पनि थिएन । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला***
नेपाली पत्रकारलाई अन्तरवार्ता नदिने केपी ओलीले भारतीय पत्रकारलाई बोलाई बोलाई अन्तरवाता दिए र आँफै नां,गीए : रवि लामिछाने, हेर्नुहोस् भडियो
आलेख : ऋण तिर्न घरबास बेच्दै सर्लाहीका उखु किसान
सर्लाही – सर्लाहीका सयौँ किसान अहिले घरघडेरीसमेत जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरूले उखु खेतीबाट मनग्गे आम्दानी हुने विश्वास गरेका थिए । मल, बीउ मात्र नभइ जग्गा भाडाबापतको ऋण ३६ प्रतिशत ब्याजसहित बढिरहेको छ । उखु किन्ने मिलका साहुको बेइमानीका कारण वषौँदेखिको बक्यौता बाँकी रहेको छ । यसैले उखु उत्पादनमा लागेको ऋण तिर्न यतिखेर यहाँका किसान आफ्नो घरखेत नै बेच्न बाध्य भएका छन् ।